KALEESSA ISA HAR’AA HAWWINA TURRE !!!! HAR’A AMMOO!! « QEERROO
KALEESSA ISA HAR’AA HAWWINA TURRE !!!! HAR’A AMMOO!!
October 9, 2016 By Qeerroo in Oduu/News	Leave a comment
SEENAA Y.G(2005)Gaaffiin Ummata Oromoo, wareegama qaalii Ilmaansaa kafalaa jiraniin Ajandaa addunyaa ta’aa jira. Dhimmi Ummata Oromoo deebii hatattamaa argachuu akka qabu humnoota addunyaa dirqisiisaa akkuma jiru, deebii argachuu baannaan rakkoo dhalachuu maluuf illee , addunyaa dhiphisaa jira. Bilisummaan wareegamaan ala akka hin jirre itti amannee itti seenuun yeroo nu jalaa fudhateera. Wareegamaaf eenyullee nama hin dirqisiisuu. Wareegama akka nu gaafatu garuu barsiisuu fi amansiisuun waan jiraati. Adeemsa kana keessa dabarree har’aa irra geenyee jirra. Wareegama sodaachu keenyaan, diinni waggoota dheeraaf nurra bubbulee nu qorqee jira. Har’a garuu wareegama keenyaan, ofirra tarree abdii Ilmaan cunqurfamoo Biyya Itoophiyaa keessa jirru taa’aa jirra.
Har’a irra dhaabbannee isa borii yaaduun hedduu nu barbaachisa. kana booda dogoggorri bifa kamiitu gama keenyaan nu mudannaan , kasaaraa ulfaataa seenna. Keessaallee hin baanu. Yaadaa fi qalbii keenyaan hedduu fageessinee yaaduutu nurraa eegama. Waan hojjannu hundaa irratti, furmaata Ummatoota hedduu ta’uu keenyaa yaaduutu nu barbaachisa. sochiin har’a itti seennee jirru, kan xumuraati. Gonkumaa duuubatti hin deebinu. Deebi’uus hin qabu. Sirni wayyaanee miidiyaa irraa of mul’isaa jira malee keessi isaa dhumatee jira. Kan har’a irra jirru caalaa jabaachuu fi wal jabeessuutu barbaachisaadhaa. Hojiileen har’a hojjannuu hegaree keenya kan hin miinee ta’uu qaban. Dhaloota nama boonsuu irraa hubachaa kan jirru kanuma.Waan boriif nu eeggatan har’aa bu’ura isaa kaa’uun kan nu barbaachisuu waa hedduutu jira.kanaaf beekumsaa fi dandeetti walitti fidanii hojjachuun hedduu murteessaadhaa.
Wayyaanee Ihaadeeg lammii keenya irratti wanti raawwataa jiru, ofiif qofa yaadu irraati. sochii keenyatu isa sodaachisee jira. Takkaa waan itti seennee kana ittuma finiinsuutuu isaan raatessa malee, lubbuu qaqqaalii har’aa dabraa jirtuun rifachuun gonkumaa barbaachisaa mitii. Lubbuun namaa waan hunda oliitii. Garuu lubbuu waa maraa ol taatee jirtutti kabajaa horuuf, lubbuun waan baatuuf mirkaneessuuf callisuun dawaa hin taanu. Gaddaan of cabsuunis hin toltu. Gumaa dhiigaa fi lubbuu barbaachisu baasanii abbaa Biyyaa ta’uutu waa hundaa caala lamii kiyya.obsii Oromoo sodaa irraa akka maddeetti fudhataa turan. Garuu miti. obsi sun waan miidhamaa ture addunyaan akka hubattuuf, qalbiin ummatichaas sadarkaa amansiisaa irra amma ga’uutti eegaa ture. injifannoon har’aa argaa jirru bu’aa ykn firii obsaa fi murannoo Ummata kanaati. Ummati Oromoo waan har’a raawwatu hundumaaf mirga itti qaba. hanga Ayyaana irreechaa eengaddaatti miidhaan Ulfaataa irra ga’aa jiru isaaf ragaadhaa. Miidhama waggaa ammanaa baattatee, narraa ba’aa hin jenne. Inumaa kan isa miidhuutu, mana isaa keessaa isa ari’aa jira. Egaa adeemsi kun qadaadamee jira. Qadaaddii kana Oromootu itti toche. Qadaaddii kana kan banus, cufus Oromoo qofaadhaa.
Oromoon har’aa sochiin itti jiru, akeekkachiisaa fi kadhaa waggaa meeqaa booda nama isa dhaga’uu dhabee kan itti seeneedha.kana booda warra diinaaf of kennanis ta’ee diina adabuuf addunyaa irratti mirga guutuu itti qabna. inumaa kana booda , warra mirgi oromoo cabaa akka jiru osoo beekanii , wayyaanee jajjabeessaa jirantu ofitti gaabba malee, har’aa waan itti jirrutti gaabbii hin qabnu. Diinni lubbuu Ilmaan Oromoo 500 ol dhumaniif sababaa hedduu nama gaddisiisan dhiheessaa jira. Lubbuu namaaf naasuu tokkollee osoo hin qabaatiin, walirra ejjatanii dhuman jedhanii of baraaruu barbaadu. Lubbuun Ilmaan Oromoo 500 oliif , sababaa haqaa dhiheessuuf daqiiqaa tokkof illee miidiyaa isaanii kan hin hayyamiin, qabeenyaa saamichaan ijaarratan gubatee jedhanii sa’aa 24 lallabaa jiran. Gaazexessitoonni Tamsgeen G/Hiwatiin durfaman , maqaaf Oromoon of himaa , du’aa lammiilee keenyaa irratti duula addaa uumuuf hojjataa jiran.
Bilisummaan wareegama lubbuu namaa gaafattuu, qabeenyaa kunuunsitii jedhanii eeguun gawwummaadhaa. Nuuti waan dhabneef falmaa jirra. Waan of harkaa qabnuu argachuuf falmaa hin jirru. Qabeenyaan harka keenya keessa hin jirree keenyaa miti. qabeenyaa keenyaan diroomuu malee hiyyoomuu hin feenu. Qabeenyaa keenyaan cabuu hin qabnuu. Isaan maakkiyaatoo fi lubbuu keenya waliin madaalsiisu. Kanaaf akka fedhan nu ajjeesan. Nuutiwoo ? gaazexessitoonni fi namoonni adda addaa, namni 500 ol dhumetti hedduu gaddinaa jedhani ka’anii , qabeenyaa badeef ammoo hegareen Biyyatti baddee jedhanii dubbatan kun, Ilmaan Oromoo 500 ol dhuman hegaree Biyyattiif faayidaa hin qaban jechuudhaa ????????????
Dogoggora kaleessaatu dubbii har’a jabeesse. Dubbiin har’aa ammoo isa caalutti nu geessa. Oromoon kanatti yaaddoo hin qabu. Oromootu waan haaraa arguuf jira malee, wayyaanee adeemsa ishee fixatteetu waa argaaf hin jirtu. Ilmaan keenya qaqqaalii waan itti dhabaa jirru fi qabeenyaa gonkumaa wal bira hin qabnuu. Hegaree keenyaaf arreedaa jirra. Boriif wal gorfachaa jirra. Kan amma nu dhiphisuu kufaatii wayyaanee miti. kan nu yaaddeessuu, dantaa keenyaaf jennee ofirra dabarree Ilmaan cunqurfamoo baraaruu, kufaati wayyaanee booda hojii biraa ofitti dabalurraa akkaataa itti of baraarru irratti hojjachuun akka nurraa eegamu yaadaa jirra. Har’aa oromoon wal dhaggeeffachuu rakkoo hin qabu. Waan barbaaduu fi gochuuf deemu irratti haalaan wal dhaggeffachaa jira. Hundumtuu beekumsaa fi dandeetti isaatti dhimma ba’ee waliif birmachaa jira. Kana caalaatti jabeessuun hedduu barbaachisaadhaa.
Gama hundaan of qopheessaa . hegaree keenya irratti hojjadhaa. Biyya Yoo taanee, karoora waggaa 20 faa’aa nu barbaachisa. aadaa habashootaa barootaaf wal nu nyaachisee of irraa mulqinee, kan Oromoo uffachuuf, aadaa jiruu fi jireenyaa ummata keenyaa bifa qabsiisuu eegalaa . dhaloota baraaruun barbaachisaadhaa. Waan addunyaatti fudhannee baanuu, waan kan keenya qofaa ta’ee bifa qabsiisaa. Siyaasa warra siyaasaaf, seera warra abbaa seeraaf, kkf wal gurmeessanii carraa argamutti akka dhimma itti baanuuf haa hojjannu. Kaleessa kan har’aa hawwaa akkuma turre, inni boriis kanuma har’aa keessaarraa eegalaa socho’aa !!!!! dubbiin heddummaateef,,,malitti hin fe’anii jedhaa Oromoon.
Wayyaaneen dhiheenyuma kana sochii abbaa hin qabnee jettee midiyaan lallabaa turtee , har’aa ammoo ABO tu irreecha dhufee jeeqaa jirtii jedhan. Kun amaluma wayyaaneetii.diinni amma kufee Biyyee arraabutti harka hin laatu. Kun nama hin raaju. Kan nama raajuu, sochii guutuu Oromiyaa bifa qindaa’een raasaa jiru kana , duubaan maaltu jiraa ? jedhanii addunyaa shakkii keessa warra daakaa jiraniidha. Qeerroon duubaa fi fuuldura hin qabu. Qeerroon Ilma ABO ti. Qarreen ammoo intala ABO ti. ABBAAN ISAANII FI HAATI ISAANII TOKKUMA. ILMI YKN INTALTI ABBAA DHAALUUN YKN MAATII DHAALUUN AADAADHA. Diinas falmaa fi caccabsaa Ilma itti qopheessuun bilchina siyaasaa mirkaneessa. Kaleessa isa har’aa hawwaa turre. Har’a ammoo isa borii gadi dhaabaa deemuun diinaan mariisiisuu hin feesisu. Kan jigne fakkaannee ni kaana. Kan facaanee fakkaannees walumaan dhaabbanna. Waa hundaa yerootuu tolcha. Waan nurraa eegamuu fi nu ilaallatu qofaa irratti haa hojjannu. Abbaa fi haadha sochii jiruu barbaanna moo,,,,,Bilisummaa barbaanna. Abbaa fi haadhasaa yoo barree maal goona ?
« Artist Sabboontuu Oromoo Seenaa Salamon Waayee Dhumaatii Ilmaan Oromoo Irreechaa fi Bakkoota Adda Addaa Irratti Wareegaman Ilaalchisee Faarsuu Warraaqsaa “Biqiltuu Koo” Jedhuun Gadda Ishee Dabarsite.
Yakka Waraanaa Ummata Oromoo Irratti Gaggeeffama Jiru Ilaalchisuun Ibsa Gamtaa Barattoota Oromoo(Oromo Student Union ) »